रिपोर्ट भन्छ रोनाल्डो अन्तिम १६ मा मड्रिडको सामना गर्न चाहदैनन् !! यस्तो छ कारण ? - Experience Best News from Nepal
विभिन्न अनलाइनले आज युभेन्ट्स स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले च्याम्पियन लिग अन्तिम १६ मा पुर्बी च्याम्पियन रियल मड्रिडको सामना गर्न नचाहेको बताएको छ । आजै ९० मिनेट डट कमले रोनाल्डोले मड्रिडको सामना किन गर्न चाहदैनन् भन्ने विषयमा समेत लेख सार्बजनिक गरेको छ ।
रिपोर्ट भन्छ रोनाल्डो फाइनल अगाब रियल मड्रिडलको सामना गर्न कुनै चाहना नरहेको तर समुह विजेता बनेको युभेन्ट्स र उपविजेता बनेको रियलको भेट फाइनल पुग्नु अगाबै हुने बताएको छ । ९ बर्ष मड्रिडका निम्ति खेल्दै ४५० गोल पुरा गरेका रोनाल्डो मड्रिडको सामना त्यस कारण पनि गर्न चाहदैनन् । मड्रिड निकै असाधारण टिम हो र मेरो योजना मड्रिडसंग हालै भिड्ने रहर होइन सायद भिड्ने अवस्था आए फाइनलमा मात्र भिड्ने – रोनाल्डो भने !!
मड्रिडमा नै रहेर रोनाल्डोले ४ च्याम्पियन लिग जितेका थिए, रोनाल्डोले २०१८ मा मात्रै युभेन्ट्स १०० मिलियनमा प्रवेश गरेका थिए । २०१७ मा युभेन्ट्स फाइनलसम्म पुग्दा मड्रिडले युभेन्ट्सलाई पाखा लगाएको थियो भने उक्त बेला रोनाल्डो मड्रिडमा आवर्द थिए । हाल रोनाल्डो युभेन्ट्स हुदा उनले आफ्नो पुर्बी क्लबसंगको भिडन्तबाट पर सर्न खोजेका छन् ।